★မြန်မာ့အလင်း★: မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၂)
မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၂)
ဘာသာတိုင်းဟာ ယဉ်ကျေး လိမ္မာအောင် ဆုံးမပေးတယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ မွတ်ဆလင်ကို ဘာသာတစ်ခု လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ လူရမ်းကားရဲ့အမူအကျင့်တွေကို သင်ကြားပေးတော့ လူရမ်းကားဝါဒလို့ပြောရပါမယ်။ အဲဒီ လူရမ်းကားဝါဒီတွေဟာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကုလားတွေကို တံခါးမရှိ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ထဲ ရောက်အောင် ကြိုးပမ်းပေးနေပါတယ်။ ဒီလိုကူညီရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ခေါတောအင်အားနဲ့ ဘာသာရေး နယ်ချဲ့ဖို့ပါ။ ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေက ဘာသာရေးနဲ့ မပတ်သက်ဘူးလို့ ငြင်းနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကုလားအကြောင်း မသိသေးတော့ သူတို့ပြောသမျှ ယုံမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘယ်လို ဘာသာရေးပြန့်ပွားအောင်လုပ်လဲ ဆိုတာသိရင် မွတ်ဆလင်တွေ ဘာပဲပြောပြော လုံးဝ မယုံတော့ဘူးကွာ ဆိုတာဖြစ်သွားပါမယ်။ ကုလားမျက်ရည်ကျပြတာတွေ၊ ခြေထောက်ဖက် သနားခံတာတွေဟာ မာယာများတာဆိုတာ သဘောပေါက်သွားမယ်။ ဒီတော့ လူရမ်းကားတွေ ဘယ်လို မွတ်ဆလင်ပျံ့ပွားအောင်လုပ်လဲ ဆက်ဖတ်ပါ။
ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေက ကျနော်တို့ကို ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းလုပ်နေတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပြောဆိုပါတယ်။ ဒီမိုမြန်မာတွေတချို့ကလည်း ကုလားပြောသမျှ မျက်ကန်းယုံပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်နော် . . . ခရစ်ယာန်ကို ဝေဖန်ရင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် လုပ်တယ်လို့စွပ်စွဲမလား? ဟိန္ဒူကိုဝေဖန်ရင် . . အဲလိုစွပ်စွဲမလား? ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်ရင် .. အဲလိုစွပ်စွဲမလား? မွတ်ဆလင်ကို ဝေဖန်တော့မှ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းလုပ်တယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? ဘယ်သူက အဓိကရုဏ်းလုပ်မှာလဲ? မွတ်ဆလင် လူရမ်းကားတွေက သူတို့ကိုဝေဖန်ရင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တဲ့ အစဉ်အလာ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အဲလိုကနေ အဓိကရုဏ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာ နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဓိကရုဏ်းဖန်တီးတယ်လို့ စွပ်စွဲလာရင် ဘယ်သူ့က ဖန်တီးမှာလဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါ။
ကဲ မွတ်ဆလင်ဝါဒ ဖြန့်ပုံလေးကို ကြည့်ရအောင်ပါ။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ ဘာသာပျံ့ပွားရေးအတွက် အရမ်းကို စိတ်အားထက်သန်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လို ဘာသာပြန့်အောင်လုပ်နေသလဲ? ခရစ်ယာန်တွေလို တအိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လိုက် စည်းရုံးတာ ရှိသလား? ခရစ်ယာန်တွေလို ဘုရားကျောင်းတွေကို အလယ်ခေါ်တာ ရှိသလား? ခရစ်ယာန်တွေလို စာအုပ်တွေ ရိုက်နှိပ်ပြီး စည်းရုံးတာ မြင်မိပါသလား? ကုလားတွေ အဲဒီနည်းတွေ လုံးဝမသုံးပါဘူး။ ဒါဖြင့်ဘယ်နည်းကို သုံးသလဲ? သူတို့သာသနာပြုနည်းကို အထူးလှို့ဝှက်လုပ်ထားပါတယ်။ လုံးဝကို မရိုးသားဘူး။ သူတို့နည်းတွေကတော့ နိုင်ငံရေး နဲ့ မြန်မာ့မီဒီယာတွေကို ထိမ်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းနဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများကို လိမ်ညာလှည့်ဖျားခြင်းစတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ အခုတင်ပြတာ သူတို့လုပ်သမှ နည်းလမ်းတွေအားလုံးကို ခြုံငုံမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းငယ်ပဲ တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ လုပ်ရပ်က အခုထက် အများကြီးပိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေး နှင့် မီဒီယာ
မိုဟာမက်ဟာ နိုင်ငံရေးသမားကြီးပါ။ သူဟာ လိမ်ညာ ကောက်ကျစ်တဲ့ နည်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီး ရန်သူ စစ်တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ရက်စက်ကောက်ကျစ်တဲ့ မိုဟာမက်ဟာ အဆိပ်ခတ်ခံရပြီး အသေဆိုးနဲ့ နိဂုံးချုပ်ခဲ့တာပေါ့။ မွတ်ဆလင်တွေဟာလည်းပဲ သူတို့ရဲ့ စံပြဖြစ်တဲ့ မိုဟာမက်ကြီးလိုပဲ နိုင်ငံရေးကို အထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ရှေးယခင် ဘုရင်တွေလက်ထက် ကတည်းက ကုလားတွေဟာ နိုင်ငံရေးမှာ နေရာ ရအောင် ကြိုးစားခဲ့တာ သိကြမှာပါ။ ဦးပိန်တံတားလုပ်တဲ့ ဦးပိန်ဟာ မွတ်ဆလင်ပါ။ (မှားရင်ပြင်ပေးပါ) ပူပုန်ထပြီး အာဏာကို သိမ်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရခါစတုံးကလည်း ကုလားတွေ လက်နက်ကိုင်ပြီး ရခိုင်မှာ ပုန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူ အာဇာနည်တွေစာရင်းထဲမှာ မွတ်ဆလင်ပါနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက အဲဒါကို ထောက်ပြပြီး သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လုပ်နေသူတွေဆိုပြီး ဂုဏ်ဖေါ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောပါမယ်။ ကျေးဇူးလုံးဝ မတင်ဘူး။ ဦးရာဇတ်မသေပဲ အသက်ရှင်ခဲ့ရင် sharia Law ကျင့်သုံးလာအောင် ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ မွတ်ဆလင်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်မှာပါ။ မြန်မာအတွက်လုပ်တာ မဟုတ်ပဲ မွတ်ဆလင်အတွက်လုပ်နေတာ ကျေးဇူးတင်စရာလား? ရဲဘော်ကိုထွေးဆိုတဲ့ကောင်လဲ မွတ်ဆလင်ဆိုပဲ။ မဆီမဆိုင် သူလဲ အာဇာနည်ဖြစ်သွားတာ ကုလားတွေ ရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်ကြောင့်လားလို့ သံသယဖြစ်မိတယ်။
ဒီခေတ်မှဆိုလဲ ကြည့်ပါ။ အတိုက်အခံတွေအပေါ် မွတ်ဆလင်တွေက သြဇာရှိနေပါတယ်။ NLD အမတ် တချို့က မွတ်ဆလင်တွေပါ။ NLD တခုခုဖြစ်ရင် မွတ်ဆလင် ဆေးရုံမှာပဲ ဆေးကုပါတယ်။ KNU ကလုပ်တဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူး ဓါတ်ပုံတွေမှာတောင် ကုလားတွေကို မြင်နေရပါပြီ။ မိုးသီးဇွန်ကလည်း ကုလားတစ်ကောင်တဲ့။ ဘလော့ ဆီပုံးတွေမှာလည်းပဲ ကုလားတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ အဲလောက်အထိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ခြေရှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကုလားတွေရဲ့ ဗျူဟာကတော့ သူတောင်းစားဗျူဟာလို့ ပြောရမှာပေါ့။ သနားစရာ သတ္တ၀ါလေးလို့ မြင်အောင် မျက်ရည်ကျပြတဲ့ နည်းကို အသုံးပြုပါတယ်။ မျက်ရည်ကျပြတာမြင်တော့ တဖက်က သနားပြီး အခွင့်အရေး တိုးပေးပါတယ်။ (ကိုရီးယားမင်းသမီးလိုချောချောက မျက်ရည်ကျပြရင် သနားပါမယ်။ မွတ်ဆလင်ဆိုရင်တော့ ကန်ထုတ်မှာပဲ) ကျနော်တို့ ဆီမှာဆိုရင် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် မရဘူး၊ မွတ်ဆလင်တွေကို နှိပ်ကွပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ မဟုတ်သတင်းတွေ ထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ မီဒီယာနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားကြောင့် နအဖဟာ ကုလားတွေကို အခွင့်အရေးတွေ တိုးပေးရပါတယ်။ အခုဆိုရင် အမေရိကန်၊ ကနေဒါတို့မှာတောင် မပေးတဲ့ ပလီတွေကနေ စပီကာကြီးတွေ နဲ့ ခွေးအူသံကို ဖွင့်ခွင့်ရနေပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုံးကြီးတောင် အလှူခံစားနေရပေမယ့် ပလီဆရာတွေဟာ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက လစာငွေကို ရနေပါတယ်။ (ကုလားတစ်ယောက်က ပြောပြတာပါ။ မှားရင်ပြင်ပေးပါ) ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက မိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့ အိန္ဒိယကို ဘုရားသွားဖူးရပေမယ့် Hajj ကို ကုလားတွေ သွားဖို့ အစိုးရက နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကူညီနေပါတယ်။ ဒါတောင် မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ကို နှိမ်ခံရတယ်လို့ အော်နေဆဲပါ။
ဘင်ဂလားဒေ့ရ်ှကကုလားတွေ သူတို့ကိုသူတို့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေလို့ နာမည်ခံပြီး ငိုပြနေကြပါပြီ။ ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေကလဲ ရှိုက်ကြီးတငင်ငင်ပေါ့။ ဒီမိုမြန်မာနဲ့ နအဖဟာ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကုလားတွေကလဲ အဲလိုအခြေအနေမှာ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပဲ ကုလားတွေ မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်အောင် အားကျိုးမာန်တက် လုပ်နေပြီ။ ဒီမိုမြန်မာ တချို့ကလဲ နအဖဆန့်ကျင်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ကုလားလုပ်သမျှ မသိဟန်ဆောင် နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီမိုနဲ့ နအဖ အမုံန်းကြီးလေ.. ကုလားတွေက ကြိုက်လေပေါ့။ အဲလိုအညှီအဟောက်တို့ အပုတ်တို့ဆိုရင် လဒတွေက သိပ်ကိုနှစ်သက်တယ်။
ကုလားတွေက အွန်လိုင်းမှာ မြန်မာအချင်းချင်းကို ရန်တိုက်ပေး တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နအဖလူဟန်ဆောင်ပြီး ဒေါ်မေငြိမ်း၊ မလင်းလက်ကြယ်စင်နဲ့ ဒေါ်သဒ္ဒါကြီးတို့ကို ဆဲခဲ့ပါတယ်။ မော်စကိုသား အိုင်ဒီနဲ့ စစ်သားဟန်ဆောင်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေကို ဆဲခဲ့တာ မှတ်မိကြမှာပါ။ နအဖ ဘလော့တွေမှာတော့ ဒီမိုမြန်မာဟန်ဆောင်ပြီး စစ်သားတွေကို ဆဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုသမားတွေက သူတို့ကို ဆဲတာ နအဖလူတွေလို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။ နအဖစစ်သားတွေကလည်း ဒီမိုသမားတွေကို ကြိမ်းမောင်းခဲ့ပါတယ်။ (မွတ်ဆလင်တွေ သွေးခွဲတာ သက်သေတွေနဲ့ ဆောင်းပါးရေးပါမယ်။) အွန်လိုင်းမှာ အဲလိုလုပ်သလိုပဲ အပြင်မှာလဲ ဂုံးချောတာတွေ၊ သွေးခွဲတာတွေ လုပ်မယ်ဆိုတာ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တုံးက ကိစ္စကို ကြုံတုံးပြောလိုပါတယ်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကနေ ကူညီခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဖြစ်ရင် မြန်မာကရှုံးမယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ကုလားအတွက် စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်ပေးပါတယ်။ နအဖကပဲ ကုလားရေပိုင်နက်ကို ကျူးကျော်သလိုလို အထင်လွဲမှားအောင် ရေးခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီတုံးက ကုလားမိုးသီး အမေရိကန်စစ်သဘောင်္ပုံသုံးပြီး ကုလားဘက်ကနေ နိုင်မယ့်အကြောင်း အားမန်အပြည့်နဲ့ ရေးခဲ့တာ ပြန်မြင်ကြည့်ပါ။ ပိတောက်မြေဆီပုံး၊ ကျေးစေတမန်ဆီပုံးမှာ ကုလားတွေ မာန်အပြည့်နဲ့ နအဖကို ငကြောက်လို့ ပြောပြီး စိန်ခေါ်တာ မှတ်မိပါသလား?
ခင်ဗျားတို့တွေလည်း ရေပိုင်နက်ဘယ်သူက ကျူးကျော်လဲဆိုတာေ၀၀ါးနေမှာပါ။ အဲဒီကိစ္စ ရှင်းပြပါမယ်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက ပြဿနာဖြစ်တဲ့နေရာ အတိအကျကို မပြောပါဘူး။ ပိတောက်မြေမှာတော့ မြေပုံအတိအကျနဲ့ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီမိုမီဒီယာတွေက အသေးစိပ်မတင်ပြတာလဲ? သူတို့ မီဒီယာကြီးတွေက အငြင်းပွားတဲ့ နေရာကို အသေးစိပ်စုံစမ်းပြီး ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိပါလျက်နဲ့ မရေးပါဘူး။ နေရာအတိအကျပြောရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမှန်ပေါ်သွားမှာ စိုး၇ိမ်ဟန်တူပါတယ်။ နောက်ပြီး နအဖကပဲ ကျူးကျော်သလိုလို ထင်အောင် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လဲ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ကျယ် နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေ အဲလို လုပ်ရဲမယ်ထင်သလား? ကုလားနဲ့ ပြဿနာဖြစ်လို့ သူ့အတွက် ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ? Daewoo Corporation ကြီးကလည်း ဘာမှ မလေ့လာပဲ နအဖစကားကို မျက်ကန်းယုံပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက်မှာ လုပ်ပါ့မလား? တကမ္ဘာလုံးက အစိုးရတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်နေရတဲ့ ဒေ၀ူးက အဲလောက် ’အ’ မလား?
ဒီမိုကုလားတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကနေ မရိုးမသားနဲ့ ဒီမိုတော်လှန်ရေးကို အရေခြုံပြီး ကူညီခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဖြစ်လာတာ ကောင်းသလိုလိုပဲ။ အရင်တုံးကဆိုရင် ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေကို မျက်ကန်း ယုံကြည်ခဲ့တယ် မဟုတ်လားဗျာ။ အခုဆိုရင် မွတ်ဆလင်ကောက်ကျစ်မှုကို ထင်းထင်းရှင်းရှင်းမြင်လာရပါပြီ။ ကုလားနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီမိုမီဒီယာတွေဟာ ကုလားအပေါ် သစ္စာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ တော်တော်ကို ခံပြင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။
ပိတောက်မြေက ကိုဂျူးဆိုတဲ့သူကိုလည်း ကုလားတစ်ယောက်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူဟာအရင်တုံးကဆိုရင် မြန်မာတွေ ညီမအရင်း ကိုလိုချင်လို့ မိဘကိုသတ်တာခဲ့တဲ့အကြောင်း သမိုင်း အထောက်အထားမရှိပဲ ကြုံတိုင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မိပါသလား? တခါတုံးကလည်း ဆီပုံးမှာလည်း ပြည်နယ်တွေ ခွဲထွက်ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ အဆိုပြုဖူးပါတယ်။ အခုလည်းပဲ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလို့ဘာမှ အရေးမကြီးဟန်ပြောနေပါတယ်။ သူ့ရေးထားတဲ့ ကော်မန့်ကို ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဟုတ်မဟုတ် ခင်ဗျားတို့ ဦးဏှောက်နဲ့သာ စဉ်းစားပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာက အဲဒီစကားတွေ ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ အဆံချောင်နေလို့ပဲနေမှာပါ။
ကုလားတွေကို တိုင်းရင်းသားထဲ ထည့်သွင်းတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သူရဲ့အမြင်
“ကျွန်တော့အမြင် လှေစီးဒုက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာ ၄-၅ ဆယ်ကိစ္စက ဒီလောက်အရေးမကြီးလှပါဘူး၊ အမျိုးသားရေးလဲမခေါ်လောက်ပါဘူး။
မြန်မာလူမျိုးနွယ်စု ၁၄၅ ကနေ ၁၄၆ဖြစ်သွားလဲ သိပ်တော့မထူးပါဘူး၊ အသားအရည်အသွေးအရောင်ပိုမို စုံလင်လာသည်လို့ဘဲ သဘောထားရမှာပေါ့။
အခုတော့ မူမရှိဘောင်မရှိ မူဆလင်ဘာသာကို ရစရာမရှိအောင် ဆဲတုန်းကဆဲပြီးမှ ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေကိုဘဲပြောတာပါ၊ မူလလက်ဟောင်း မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာမူဆလင်ဘာသာဝင်တွေမပါပါဘူး ပြောလိုပြော၊ ကုလားလူမျိုးမကောင်းကြောင်းရေးပြီးမှ မြန်မာပြည်က ကုလားတွေကကောင်းပါတယ် အခုလှေစီးဒုက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာကုလားဘဲ မကောင်းတာပါနဲ့ ပြန်ဘရိတ်အုပ်လိုအုပ်၊
ဦးနု အာဏာရူးတာကော ဒေါ်စု အာဏာမက်တာကော အားလုံးလွှဲချ ကိုယ်လိုသလိုပုံဖေါ် နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်လုပ် နေတာမှန်းသိလို့ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်းမပြုခဲ့ပါ။”
ကျနော် (ဇော်မျိုး) မွတ်ဆလင်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ သူပြန်ရေးတဲ့ စာမှာ မွတ်ဆလင်ကိုကာကွယ် ယုံတင်မကပဲ မြန်မာအချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးထားပါတယ်။
“မောင်သခင်မျိုးပြောသလို မတော်တရော်ဇတ်လမ်းတွေ ဘာသာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာမှာလဲ ရှိပါတယ် လေ့လာကြည့်ပါဦး၊
ကိုယ်မကြိုက်ရင် မကိုးကွယ်ဘဲနေပေါ့ကွာ။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာအားလုံးကို မိမိဘာသာကဲ့သို့ လေးစားပါ။
ဗမာတွေလဲ ဒီနေရာဒီဒေသကို ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာရင်း ရောက်လာကြတာပါဘဲ။ နေရင်းဒေသခံ မွန်၊ ကရင်၊ ရှမ်းနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ဗမာတွေက တိုက်ထုတ် ခဲ့တာဘဲ။ ယခင်မွန်နိုင်ငံကြီး ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးမှတ်လား။”
မြန်မာတွေကတော့ မွတ်ဆလင်တွေကို လူလုိ့သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ အခုဆိုရင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ကုလားတွေဟာ အင်မတန်ကို သြဇာကြီးနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဘက်မှာ သူတို့ သြဇာကြီးလာလေ…. မွတ်ဆလင်ဝါဒကို လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် တနည်းမဟုတ် တနည်းလုပ်လာ မှာပါ။ ကုလားတွေက ဒီမိုကရေစီ အတွက်လို့အော်နေလဲ သတိထားယုံပါ။ လက်တွေ့မှာတော့ မွတ်ဆလင်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်သားတွေကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ကုလားတွေနဲ့ သတိထား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ။ ကုလားတွေက စကားပြော ချိုသလောက် အင်မတန် လိမ်ညာ ကောက်ကျစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့မွတ်ဆလင်ဝါဒကြီးအတွက် အကြံကြီးကြီးနဲ့ လုပ်နေတာမို့ နအဖနဲ့ ဒီမိုမြန်မာတွေ သတိရှိစေချင်ပါတယ်။
faithfreedom.org မှာ ရေးထားတဲ့ Confessions ofaFormer Islamist ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီဆောင်းပါးမှာ အီဂျစ်က ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတွေကို မွတ်ဆလင် ယောကျားတွေက လိမ်ညာပြီး ဘာသာပြောင်းနိုင်ရင် ဆော်ဒီကနေ ဆုငွေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အသေးစိပ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ သူရေးသားချက်မှာ အီဂျစ်ခရစ်ယာန် အမျိုးသမီးကို မွတ်ဆလင်လုပ်နိုင်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,800 ၀န်းကျင်မှာ ရရှိပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ မျိုးရိုးထဲက ဖြစ်ပါက ဒေါ်လာ 36,089 ရတယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီငွေကိုတွေက လိမ်ညာတဲ့ မွတ်ဆလင်ယောကျားက တစ်ဝက်ရပြီး ကျန်တ၀က်ကိုတော့ ကူညီပေးတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက ခွဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများတွေကို ဘယ်လိုယုတ်မာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်း အများကြီးရေးထားပေမယ့်။ နှစ်ပုဒ်ပဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့လဲ မဖတ်ချင်တော့ပါဘူး။ အရမ်းကို ရွံပြီး အန်ချင်စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေဆိုရင် တစ်ပုဒ်တောင် ဆုံးအောင် ဖတ်ဖို့ မလွယ်လောက်ပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးကနေ အဓိက အရေးပါတာလေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင် . . .
(၁) ကုလားတွေက မွတ်ဆလင်ဘာသာထက် ခရစ်ယာန်ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဟန်ပြပါတယ်။ church အတူတူ သွားတာတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်အကြောင်း စိတ်ဝင်တစားမေးတာတွေ လုပ်ပါတယ် (ဗုဒ္ဓဘာသာကို မွတ်ဆလင်တွေ စိတ်ဝင်စား သယောင်လုပ်ပြရင် လုံးဝ မယုံပါနဲ့)
(၂) လိမ်ညာပြီးချစ်ဟန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို အသံတွေတောင် တုံပြီး ဟန်ဆောင်ခဲ့ တယ်ဆိုပဲဗျ။ မိုဟာမက်တပည့်တွေက မာယာကတော့ တကယ်များပါတယ်။ ဒီဗီဒီယို ထဲမှာ ပလီဆရာ ငိုဟန်ဆောင်တာနဲ့ သွားပြီး တူနေတယ်။ မိန်းထက်တောင် မာယာများနေပါပြီ။ ယောကျားမဟုတ် မိန်းမ မဟုတ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပြောတာ ဖြစ်မယ်။
(၃) မွတ်ဆလင်မတွေဟာ မိန်းအချင်းချင်းစာနာစိတ် လုံးဝ မရှိပဲ သူငယ်ချင်း အရင်းကိုပင် ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း လုပ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်ကို သိလာပါတယ်။ မိန်းမအချင်းချင်း စာနာစိတ် လုံးဝကင်းပြီး လူစိတ်မရှိသူဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မိန်းမယုတ်အစစ်ပဲ။
(၄) မွတ်ဆလင်တွေဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အရှက်ကိုခွဲပြီး အကျပ်ကိုင်တာလဲ သတိထားမိပါတယ်။ သူတို့ အလိုက်လျောပြီး မွတ်ဆလင်ဘာသာပြောင်းခဲ့ရင်တောင် နောက်ဆုံးမှာ ဘ၀ကို သုံးမရအောင် ဖျက်ဆီးပြစ်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား?
(၅) ခရစ်ယာန်မိန်းခလေးတွေကို ကုလားတွေဟာ ဆုငွေနဲ့ ဘာသာရေးအတွက် လိမ်လည် လှည့်ဖျားနေကြတာပါ။ ဒါကို ဘာသာရေးလို့ ခေါ်ဦးမလား? ကျနော်တို့ကတော့ ယောကျားဖြစ်ပြီး ဖာခံစားနေတဲ့သူတွေလို့ပဲ ပွင့်လင်းစွာမြင်ပါတယ်။
(၆) မွတ်ဆလင်တွေဟာ တခြားဘာသာကို အရှက်ရစေလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန် တစ်ယောက် ပြောင်းလာရင် ဆိုင်းတွေ၊ ဗုံတွေနဲ့ လှည့်လည်တာဟာ ခရစ်ယာန်တွေကို အရှက်ခွဲတဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုတာ သိသာကြီးပါ။
အဲဒီစာထဲမှာ ရေးထားတဲ့အချက်အလက်တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာကြားခဲ့တရတာနဲ့ အတူတူဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာမကို မယားငယ်လုပ်နိုင်ရင် ပလီက ဆုငွေပေးတယ် . . . ရွှေတိဂုံဘုရားကို အတူတူ ကန်တော့တဲ့ ကုလားဟာ ကလေးရမှ ခွေးစိတ်ဝင်သွားတယ်။ မြန်မာမတွေက သူတို့ကုလားရည်းစား ဗုဒ္ဓဘာသာ စာအုပ်ဖတ်ပြရင် ဟုတ်လှပြီထင်နေတယ် မဟုတ်လား? စတဲ့ အကြောင်းတွေဟာ အခု ဇတ်လမ်းထဲမှာ ရေးထားတာနဲ့ လုံးဝကို တူနေပါတယ်။ မြန်မာတွေက အဲဒါတွေကို ကောလ ဟာလ တွေလို့ပဲ ယူဆနေပါတယ်။ စဉ်းစားဖို့က မြန်မာနဲ့ အီဂျစ်ဆိုတာ အဝေးကြီးပါ။ ကောလဟလဆိုလဲ အချက်အလက်တွေက တူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ အခုဟာလုံးဝကို တူနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကောလ ဟာလ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ခရစ်ယာန်တွေက မွတ်ဆလင်ကို God ကိုးကွယ်တာချင်း အတူတူမိုလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာထက် သူတို့ကို ပိုခင်နေတယ်။ ခရစ်ယာန်ညီနောင်တွေ သတိထားဖို့က ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ God ကို မယုံပေမယ့် မွတ်ဆလင်ယောကျားတွေလို ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတွေကို မဖျက်ဆီးပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေလိုလဲ ခရစ်ယာန်တွေကို ခေါင်းဖြတ် မသတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေလို ခရစ်ယာန်မိန်းမကို ဘာသာ အတင်းမပြောင်းခိုင်းပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘာအတွက် မွတ်ဆလင်ကို ပိုခင်နေပါသလဲ? မွတ်ဆလင် မြန်မာနိုင်ငံကို လွှမ်းမိုးသွားရင် ခရစ်ယာန်အတွက် ပိုကောင်းနိုင်တယ်ထင်ပါသလား? ဒါကြောင့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ တခြားမြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့အတူတူ လက်တွဲစေချင်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေထက် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ပိုမိုပေါင်းသင်းစေချင်ပါတယ်။
ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် မိန်းမတစ်ယောက်အချစ်ကိုရ ဖို့ အသံတွေတုံပြီး မာယာများတဲ့ ကုလားတွေက ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဟာ ဘာသာရေးမဟုတ်ပဲ လူအခွင့်အရေးကြောင့်ပါလို့ ပြောနေတာ အမှန်ပြောတယ်လို့ ထင်သလား? church ကိုသွားပြီး လိမ်ညာဟန်ဆောင် ကန်တော့တဲ့ ကုလားတွေက ရိုဟင်ဂျာဟာ ဘာသာရေးမဟုတ်ပဲ လူအခွင့်အရေးကြောင့်လုပ်နေပါတယ်လို ပြောတာယုံမလား?
မွတ်ဆလင်ဝါဒအတွက် အယုတ်ဆုံးအလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ ယုတ်ညံ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ ကုလားတွေ ပြောစကား ကျနော်တို့ ကတော့ လုံးဝ မယုပါဘူး။ ကုလား ၀က်ချေးစားပြီး ပြောရင်တောင် မယုံဘူး။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ သူတို့အချင်းချင်းလဲ လိမ်တယ်။ သူများလဲ လိမ်တယ်။ အဆင့်ကို လုံးဝမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ကုလားပြောစကားယုံတဲ့သူက အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ သူသာဖြစ်ပါတယ်။
ဘလော့တွေမှာ စာတွေများများဖတ်၊ သတင်းတွေများများနားထောင်.. ဒါနဲ့တင် ရပ်မသွားပါနဲ့ဗျာ။ ကျနော်တို့တွေရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ ပြုပြင်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲမှာ "တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ခုခု လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ အမြဲသတိထားပါ" ကျုပ်တို့တွေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးတွေအတွက် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် လုပ်အားပေးမှဖြစ်မယ်။ တစ်နေ့ကို ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်လောက်အချိန်ပေး၇င် ရပါပြီ။ ယခုလက်ရှိကတော့ ဘလော့ ဆီပုံးတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာအကြောင်းလူတွေ သိအောင် လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ email တွေနဲ့ မိမိတို့ မိတ်ဆွေတွေဆီကို အကြောင်းကြားပါ။ တကယ်လို့ privacy အတွက် IP ဖျောက်လိုတယ်ဆိုရင် http://proxy.org/cgi_proxies.shtml မှာ proxy တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါကို သုံးပြီး ကုလားဘလော့တွေနဲ့ သစ္စာဖေါက် မြန်မာ ဆီပုံးတွေမှာ ရေးပေးပါ။ အခုထက်ထိ ဆီပုံးနဲ့ ကော်မန့်တွေမှာ တက်တက်ကြွကြွလုပ်တာ မမြင်သေးပါဘူး။ လူလေး ၂-၃ ယောက်လောက်ကပဲ တက်ကြွပါတယ်။ ဒါတောင် ကျနော်တို့ ဆီပုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်နဲ့တော့ မရဘူးဗျ။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် တက်တက်ကြွကြွလုပ်ပါ။ ခင်ဗျား မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း စည်းလုံးပါ။ မိမိ သွားလည်တဲ့ဘလော့တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာကို ဆန့်ကျင်တဲ့စာကြောင်းလေး တစ်ကြောင်းလောက်တော့ ရေးသွားလိုက်ပါ။အချိန်လဲ သိပ်မကြာပါဘူး။ တစ်ယောက်ချင်းအတွက် ဘာမှ အပန်းမကြီးပေမယ့် လူများများက လုပ်သွားရင် အရမ်းကို ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရေးထားတဲ့ စာကို အလေးမထားလို့ ၊ ဆန့်ကျင်လို့ ၊ ရန်တွေ့လို့ ၊ ဆဲဆိုလို့ဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ အသိအမှတ်ပြုတာ မပြုတာက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရည်မှန်းချက်ကိုသာ အဓိကထားပါ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ဆိုရင် အမေတွေ နှမတွေနဲ့ ဆဲဆိုခံလာခဲ့တာ အရေကိုထူနေပါပြီ။
မွတ်ဆလင်တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်ကို မြန်မြန်တင်ပြဖို့ ဆန္ဒစောနေတဲ့သူတွေ ရှိမှာပါ။ အဲဒါအတွက်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ချပြပြီး ဘယ်သူမှ လိုက်မလုပ်ဘူးဆိုလဲ အလကားပါပဲ။ လိုက်လုပ်ချင်အောင်လဲ မွတ်ဆလင်ဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာလေးတွေကို ပြောပြရပါတယ်။
ဆက်ပြောချင်တာက . . . . . တချို့က မွတ်ဆလင်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီး သံသယရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်မလား။ ဆူပူမှုတွေဖြစ်မလားဆိုပြီး တွေးပူနိုင်ပါတယ်။ နအဖကရောခွင့်ပြုပါ့မလား. . . စတဲ့ သံသယတွေ အများကြီးရှိနေမှာပါ။ ဒါတွေအတွက် မစိုး၇ိမ်ပါနဲ့။ ကျနော်တို့က မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားလာခဲ့သူတွေပါ။ ဗမာတိုင်းရင်းသား မြန်မာစစ်စစ်တွေပါ။ တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်မယ့်အရေးကို မလုပ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ တင်ပြမယ့်အစီအစဉ်က လက်ရှိ နိုင်ငံရေးလုပ်ပုံနဲ့ လုံးဝကွာခြားပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တာလမ်းစဉ်နဲ့သွားမှာပါ။ အဲဒီလမ်းစဉ်ရဲ့ အားသာချက်က လက်ရှိ မွတ်ဆလင်ကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့သက်သက် မဟုတ်ပဲ မြန်မာပြည် ဆင်းရဲတွင်းကနေ တက်လာအောင်လည်း လုပ်ပေးမှာပါ။ မြန်မာလူမျိုးများသာမကပဲ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ ကုလား၊တရုပ်တွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က မြန်မာတွေတွေလဲ (ရခိုင်တိုင်းရင်းသား) စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေ အကူအညီမပါပဲ မွတ်ဆလင် သူခိုးဂျပိုးတွေ လုယက်မှုကနေ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်း ပြောမှာပါ။
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်က ပင်ပန်းခံ.. စဉ်းစား . . တွေးခေါ်ပြီး.. အစီအစဉ်ကို တင်ပြပေမယ့် ခင်ဗျားတို့က မကူညီဘူးဆိုရင်တော့ အလကားပဲ။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့ လူတွေရဲ့ ကူညီမှုတော့ အရမ်းကိုလိုတာပေါ့ဗျာ။ နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကတော့ လွယ်အိပ်လိုမလုပ်ပဲ ရှေ့က ဦးမဆောင်နိုင်ရင် နောက်ကလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကလိုက်တာ ဂုဏ်ငယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ကဦးဆောင်တိုင်းလဲ ဆရာကြီးလုပ်တယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ ဘေးကနေ လွယ်အိပ်လုပ်တဲ့သူတွေသာ ဂုဏ်ငယ်ပါတယ်။ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဒီမို၊ နအဖ၊ KNU၊ DKBA၊စစ်သား ဆိုတဲ့ တံဆိပ်အစွဲတွေကို ဖျောက်မှဖြစ်မယ်။ တတ်နိုင်တရွေ့“မြန်မာလူမျိုး” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ အသုံးပြုစေချင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မွတ်ဆလင်က ရခိုင်မ တစ်ယောက်ကို နွားခိုးရင်း ဓါးနဲ့ခုတ်သွားတယ်လို့ ပြောမယ့်အစား “မြန်မာမ တစ်ယောက်လို့” သုံးရင် ကွာခြားသွားပါတယ်။ ရခိုင်လို့ပြောတော့ ဗမာ၊ ကရင်၊ ရှမ်းတွေက သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလို ခံစားရပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကရင်ရွာကို စစ်တပ်က မီးရှို့သွားတယ်လို့ ပြောနေတာတွေ၊ ကရင်ဒုက္ခသည်လို့ပြောနေတာထက်.. မြန်မာရွာကို စစ်တပ်က မီးရှို့တယ်။ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေလို့ပြောဆိုတာ ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ကရင်လို့ပဲပြောတော့ တခြား ရခိုင်တွေ၊ ဗမာ၊ ကချင် တွေက မဆိုင်သလိုခံစားရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဒုက္ခသည်လို့ ပြောပါများရင် စစ်တပ်ဖက်က အကြီးအကဲ ဗမာ၊ ရှမ်းတွေကလဲ ပိုပြီးဂရုစိုက်ချင်လာမှာ အမှန်ပါ။ လက်တွေ့ကျကျ ပြောနေတာပါ။ လူအခွင့်အရေးတွေ ဘာတွေ ညာတွေဆိုတဲ့ ဆိုတာကြီးကို ခဏမေ့ထားပါဦး။
ကနေဒါမှာကောင်းတဲ့ လမ်းစဉ်လေးကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ကနေဒါမှာဆိုရင် လူမျိုးပေါင်းအများကြီးရှိတယ်။ အားလုံးကနေဒါလူမျိုးဆိုတာပဲ အများဆုံးသုံးပါတယ်။ ဒီတော့ တရုပ်၊ အမည်း၊ အဖြူဆိုတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ စိတ်က နည်းသွားပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ပိုမိုရင်းနှီးလာပြီး ယိုင်းပင်းကူညီလာတယ်။ နားလည်အောင်ပြောရရင် စည်းလုံးလာတယ်ပေါ့ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့တွေဟာ တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး ရန်ဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက်ရှိပါပြီ။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတဲ့ တံဆိပ်တစ်ခုအောက် မှာ အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် သေးသိမ်တဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ ပပျောက်သွားပြီး … ဒို့မြန်မာပြည်ကြီးဟာ တိုးတက်လာမှာပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 2:39 PM
ကောင်းတယ်ဆက်လုပ် အဲလိုဆက်လုပ် အချိန်ကအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်
မင်းတို့လိုကောင်တွေမဟုတ်ဘူး မင်းတို့တဲ့ အဆ ၁၀၀ ဆိုးတဲ့ကောင်တွေလုပ် မတရားတာလုပ်လေ မကောင်းကြံလေလေ မင်းတို့ သိက္ခာမင်းတို့ကျလေလေပဲ
ငါအားပေးတယ် ကွာဆက်လုပ် ကြ
မွတ် ၁၀၀% ကုလားကြီး
dar larr Buddaasoneama khan Buddish tway so dar.. ..
kalarr tway lote ta mya Islam ma kg bu lo pyawsa tan so yin, minn doe tway yat lote yataya ,Gawtama Budda lae ma kg bu lo pyaw ya dot mar pae..
ကိုတောသား ခင်ဗျားနှယ် ရပ်တည်ချက်ကလဲ တည်တည်တံတံမရှိပါလား။ ခင်ဗျားပြောတာအားလုံးဆန့်ကျင်တဲ့သူ အားလုံး ကုလားလို့သတ်မှတ်နေတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကခုမှဘာလို့ပေါ်လာရတာလဲ၊ ဘာလဲအခုမှ ဘလောက်စရေးတယ်လို့မပြောနဲ့နော်။ ခင်ဗျားအရင်ဘလောက်အဟောင်းမှာ တခါမှမရေးဘူးဘူး။ 9/11ကိစ္စတောင် ဒီမိုမီဒီယာတွေကို လိမ်တယ်ဆိုပြီးသက်သေလိုက်ပေးခဲ့တယ်လေ။ ကော်ပြီပြန်လုပ်ပေးရမလား။
ခင်ဗျား ဘလောက်ရေးတဲ့ သက်တမ်းတလျောက်ခုမှ ဘာလို့ဒီအကြောင်းတွေေ၇းရတာလဲ
ဘာလဲ ခင်ဗျားဆရာတွေကခုမှ ရေးခိုင်းတာလား
ခင်ဗျားအခုလိုရေးတာတွေရော ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ ညီရဲ့လား။
သို့ ယောကျား ဖာသည်များ
ဟေ့ကောင်တွေ ပလီကဆုငွေရဖို့နဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာအတွက် မိန်းခလေးတွေကို မင်းတို့ ခန္ဓာကိုပုံအပ်တယ်ဆိုတာ ဖာသည်တွေလုပ်ရပ်ကွ။ မင်းတို့ မွတ်ဆလင်ယောကျားတွေဟာ ယောကျားဖာသည်တွေပဲ။
ယောကျားဖာသည်ဖြစ်တဲ့မင်းတို့က မိုဟာမက်က သူ့သားမိန်းမကို ယူခဲ့တဲ့အကြောင်း လူလယ်ခေါင်းမှာ ပြောခံရတုံးက လုံးဝ မရှက်ဘူး။ Quran ကျမ်းထဲမှာ နေ၀င်တာက ရွဲ့အိုင်ထဲ နေလုံးကြီးရောက်သွားတာလို့ ရးထားတဲ့ အကြောင်း ဟာသလုပ်တုံးကလည်း မင်းတို့ မရှက်ဘူးနော်။ မွတ်ဆလင်ယောကျားဖာသည်တွေ တခြားဘာသာဝင် မိန်းခလေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် လုပ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတော့လဲ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ မင်းတို့အမေကိုတောင် မွတ်ဆလင်ဘာသာအတွက် လိုအပ်ရင် မျိုးစေ့ထည့်ပေးမယ့် သဘောရှိတယ်။
ကဲကဲ.. ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် 9/11 ဘင်လာဒင်မလုပ်ဘူးပြောတာနဲ့ မင်းတို့ မွတ်ဆလင်တွေက လူကောင်းဖြစ်သွားရောလား? ငါက မွတ်ဆလင်တွေ 9/11 မလုပ်ဘူးလို့ယူဆရင် မိုဟာမက် သူ့အဒေါ်ဗိုက်ထဲ ကလေးထည့်ဖို့လုပ်တာကို အကောင်းမြင်ပေးရမှာလား? ဟဲဟဲ..
ကဲကဲ..မင်းတို့တွေကို မေးမယ်။ ဖြေကြည့်ပါမယ်
မင်းတို့မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ဘာအတွက် ယုံကြည်နေတာလဲ? လူတွေကိုသတ်ဖြတ်၊ မိန်းခလေးတွေကို လိမ်ညာလှည့်စားထား ၊ မင်းတို့မွတ်ဆလင်မတွေက ခွေးသားဖေါက်သလို ကလေးတွေမွေးပြီး ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအများဆုံး ဘာသာဖြစ်လာတာ ဂုဏ်ယူသလား? မွတ်ဆလင်ကို မယုံကြည်တော့ဘူးလို့ မင်းတို့ ပလီဆရာကို ပြောရဲတဲ့ သတ္တိုရှိလား? အဲဒီမေးခွန်း ၃ ခု ကို ဖြေရဲတဲ့ သတ္တိုရှိလား?
ဟားဟား. . .. .
မျောက်တူ ဆိတ်တူ မွတ်ဆလင်များကို သနားတဲ့
ကျေးဇူးတင်တယ်။မိုးသီးနဲ.လွန်းဆွေတော.ကျနော်.IP address ကို ban ထားတယ်။ဒါပေမဲ.ခင်ဗျားေ၇းထား
တော.ကြာပြီ။ဗမာပြည်က under ground ကောင်လေးတွေဆွဲစိခံနေ၇တာဒီကောင်တွေတဖက်
အားပေးတယ်ဟေ့..ကိုဇော်မျိုး.... ခင်ဗျားတယောက်ပဲ ချပြရဲတဲ့ သူရှိတယ် ။ ကျန်သူတွေကတော့ လူညီလို့ ဤကို ကျွဲဖတ်လို့ကောင်းနေတုန်းဗျာ....စိတ်ပျက်စရာ
ကုလား-မြန်မာ အရေးအခင်း ကို အမြန်ဆုံးဖြစ်စေချင်ပါပြီ ။ ၃ခါလောက် ဖြစ်လိုက်ရင် ဒီကုလားတွေ မျိုးပြုတ်ပါ.ပေါ. ။မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဓါးတချောင်းလောက် သွေးထားကြပါ ။လူမျိုးဘာသာသာသနာ အတွက် ။ချကြစမ်းပါ ။
poor u... poor u